China Glass tavoahangy famafazana Factory, Glass famafazana tavoahangy Supplier
Tavoahangy famafazana vera Amber 250ml ho an'ny menaka tena ilaina amin'ny fanadiovana zaridaina, famahanana
➤ Tavoahangy GLASS SPRAY - Ny fonosana dia misy tavoahangy vera amber 5 Pieces 250ml miaraka amin'ny sprayers trigger mainty 5, ary satroka fitehirizana 5 ho an'ny fahafaha-manao ambony indrindra!Haben'ny tavoahangy: (L x W) 19 x 6cm / 7.5x2.4inch.
➤ FIAROVANA UV & TANANA ECO — Arovy amin'ny fahapotehan'ny taratra ultraviolet ary miaro ny menaka ilainao.Amber Glass dia tsy hisy fiantraikany amin'ny menaka matanjaka toy ny citrus.BPA & Lead tsy misy
➤ NOZZLES ADJUSTABLE - Fihodinana 90 ° safidio ny maody, avelao ny station SPRAY, STREAM na OFF.Miaraka amin'ny paompy fanerena fanampiny ho an'ny lotion.Azo ampiasaina indray ary manampy ny tontolo iainana.
➤ REFILL BOTTLES - fitoeran-javatra azo amboarina tsara ho an'ny famafazana menaka tena ilaina, hazel ody, ranom-boasary, famafazana tarehy, aromatherapy, mpanadio rivotra, famafazana efitrano, famafazana vatana, vokatra hatsaran-tarehy DIY ary ranon-javatra hafa.
➤ FAMPIASANA IREO - Ny tavoahangy famafazana lehibe dia azo ampiasaina hampifangaroana ireo mpanadio anao manokana amin'ny famafazana zavamaniry, fanadiovana rivotra voajanahary, gorodona na karipetra madio, famafazana fanamafisam-bolo, famafazana biby fiompy ho an'ny parasy na fofona, fanamafisam-peo kosmetika, fanasan-javamaniry, fanalana fofona ary fomba fanamboarana hoditra sy hatsaran-tarehy an-trano.
Tavoahangy famafazana vera Amber 250ml Tavoahangy tsy misy na inona na inona miaraka amin'ny zavona fanaparitahana trigger sy maodely tondra-drano kaontenera azo havaozina ho an'ny menaka tena ilaina amin'ny fanadiovana zaridaina, famahanana
➤ Miaro amin'ny fahasimban'ny taratra ultraviolet ary miaro ny menaka ilainao.Amber Glass dia tsy hisy fiantraikany amin'ny menaka matanjaka toy ny citrus.BPA & Lead tsy misy
➤ Fihodinana 90 ° safidio ny maody, avelao ny station SPRAY, STREAM na OFF.Miaraka amin'ny paompy fanerena fanampiny ho an'ny lotion.Azo ampiasaina indray ary manampy ny tontolo iainana.
➤ Fitaovam-pitaterana azo amboarina tsara ho an'ny famafazana menaka iankinan'ny aina, ody hazela, ranom-boasary, famafazana tarehy, aromatherapy, mpanadio rivotra, famafazana efi-trano, famafazana vatana, vokatra hatsaran-tarehy DIY ary ranon-javatra hafa.
➤ FAMPIASANA - Ny tavoahangy famafazana lehibe dia azo ampiasaina mba hampifangaroana ny mpanadio anao manokana amin'ny famafazana zavamaniry, fanadiovana rivotra voajanahary, gorodona na karipetra madio, famafazana fanamafisam-bolo, famafazana biby fiompy ho an'ny parasy na fofona, fanamafisam-peo amin'ny tarehy, fanasan-javamaniry, fanasan-dabozia ary vita an-trano fomba fanamboarana hoditra sy hatsaran-tarehy.
Fitaovana: Glass matevina
3 Settings: Spray, Steam ary Off
Fonosana misy: 5 x Tavoahangy famafazana ho an'ny fanadiovana 250ml
10ml 15ml 20ml 30ml 50ml Boribory somary lavalava Refill menaka manitra Atomizer tavoahangy Kosmetika Amber Glass Spray tavoahangy
Eco-namana, mateza ary azo averina
Mazava na namboarina
Silk-ecran fanontam-pirinty, Labeling, Hot stamping sns.
5-12 andro ho an'ny entana entana aorian'ny fandoavam-bola.25-35 andro ho an'ny famolavolana namboarina, miankina amin'ny habetsahana sy ny modely.
T / T 30% petra-bola, fifandanjana alohan'ny fandefasana.
F: Ahoana no handraisana ny vidin'ny teny ao anatin'ny fotoana fohy indrindra?
A: Rehefa mandefa fanontaniana izahay, azafady mba ho azo antoka ny antsipiriany rehetra, toy ny modely NO., ny haben'ny vokatra, ary ny halavan'ny fantsona, ny loko,
hamaroan'ny kaomandy.Handefa tolotra miaraka aminao izahay tsy ho ela.F: Afaka mahazo ny santionany maimaim-poana ve izahay?
A: Eny, azonao atao!Ny santionany dia maimaim-poana fa ny entana ho an'ny express dia ao amin'ny kaontin'ny mpividy.
F: Ahoana ny amin'ny fotoana fitarihana mahazatra?
A: Manodidina ny 25 hatramin'ny 35 andro aorian'ny nandraisany ny petra-bola.
F: Inona no karazana fepetra fandoavam-bola raisinao?
A: Amin'ny ankapobeny, ny fepetra fandoavam-bola ekenay dia T / T (50% petra-bola, 50% alohan'ny fandefasana) ary 100% fandoavam-bola mialoha.
F: Inona no fomba fandefasana anao?
A: Izahay dia hanampy anao hisafidy ny fomba fandefasana tsara indrindra araka ny fepetra takiana.An-dranomasina, an'habakabaka, an-tserasera, sns.
F: Ahoana no hifehezanao ny kalitao?
A: Aorian'ny fankatoavana santionany dia hanomboka famokarana faobe izahay.Manao inspection 100% mandritra ny famokarana;dia manao inspection kisendrasendra aloha
fonosana;maka sary rehefa avy nofonosina.
F: Raha misy olana momba ny kalitao, ahoana no ahafahanao mandamina izany ho anay?
A: Raha misy vokatra tapaka na kilema hita, dia tsy maintsy maka ny sary avy amin'ny baoritra tany am-boalohany.Ny fitakiana rehetra dia tsy maintsy aseho ao anatin'ny 7 andro fiasana aorian'ny famoahana ny kaontenera.Ity daty ity dia miankina amin'ny ora fahatongavan'ny kaontenera.Aorian'ny fifampiraharahana, raha afaka manaiky ny fitakiana avy amin'ny santionany na sary asehonao izahay, amin'ny farany dia hanonitra tanteraka ny fahaverezanao izahay.
F: Ny orinasanao dia orinasa transcriptional na orinasa mpanamboatra indostrialy?
A: Izahay dia orinasa mpanamboatra indostrialy izay hita ao an-tanànan'i Dongguan.
F: Afaka manao pirinty amin'ny tavoahangy ve isika?
A: Eny, azonao atao.Afaka manolotra fomba fanontana isan-karazany izahay.
F: Afaka manambatra zavatra maro samihafa ao anaty fitoeran-javatra iray ve isika amin'ny filahatro voalohany?
A: Eny, azonao atao.Fa ny habetsahan'ny entana tsirairay nasaina dia tokony hahatratra ny MOQ.
F: Ahoana no hanombohana tetikasa manokana amin'ny orinasanao?
A: Azafady alefaso aminay ny sarinareo (afaka mamorona sary ho anao ihany koa izahay) na santionany tany am-boalohany mba ahafahantsika manolotra teny
voalohany.Raha voamarina ny antsipiriany rehetra, dia handamina ny fanaovana santionany izahay rehefa nahazo ny petra-bola.
siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy ranom-boankazo, tavoahangy vera labiera, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy diffuser volotara,